Huawei Y6 2018 sy Huawei Y7 2018: Famaritana, vidin'ny fandefasana | Androidsis
Huawei Y6 2018 sy Huawei Y7 2018: Ireo finday vaovao ao amin'ny faritra Y
Ireo finday ao amin'ny faritra Y dia an'ny sokajy ekonomika be indrindra an'i Huawei. Ny marika sinoa dia vao nohavaozina ity sokajy ity miaraka amin'ireo telefaona vaovao roa. Modely roa vaovao izay mitondra rivotra madio amin'ity karazana finday ity. Ireo no Huawei Y6 2018 sy Huawei Y7 2018. Ireo modely roa ireo dia efa natolotry ny marika tamin'ny fomba ofisialy.
Amin'izay mba efa fantatray daholo ny pitsopitsony momba ireo mpikambana vaovao ao amin'ny faritra Y. Tokony holazaina fa ny maodely dia maneho fandrosoana miavaka ho an'ny marika marika sinoa. Avelanay miaraka aminao ny pitsopitsony rehetra momba ireo telefaona roa ireo.
Na ny Huawei Y6 2018 na ny Huawei Y7 2018 dia napetraka ho sehatra fidirana mahazatra, na dia misy endri-javatra mahaliana indrindra aza. Ka azoko antoka fa handre zavatra betsaka momba azy ireo isika. Hiresaka momba ny telefaona tsirairay avy isika.
2 Famaritana Huawei Y7 2018
Ny telefaona dia fanavaozana ny modely iray ihany tamin'ny taon-dasa. Na dia amin'ity tranga ity aza dia fanovana vitsivitsy no natolotra. Tsara homarihina fa maodely lehibe kokoa izy io. Ka ny ambany dia miloka amin'ny telefaona misy écran lehibe koa. Ireo no Huawei Y6 2018 famaritana feno:
Rafitra fandidiana: Android 8.0 Oreo
efijery: 5,7 santimetatra miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9 sy ny vahaolana HD + (1.440 x 720)
processeur: Snapdragon 425 Quad-core Cortex A53 1.4 GHz
Fitahirizana anatiny: 16 GB (Azo aorina amin'ny microSD)
Fakan-tsary eo aloha: MP 8, LED flash, AR Lens
Fakan-tsary Rear: MP 13, PDAF, flash LED
ny hafa: Radio FM, fanekena tarehy
lafiny: 152.4 x 73 x 7.8 mm
lanja: 150 g
loko: Mainty, volamena na manga
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa ambany farany ambany ity, na dia mampanantena hanome fahombiazana tsara aza izy io. Ho fanampin'ny fananana processeur Snapdragon, izay mazàna dia antoky ny kalitao ihany koa. Ny Huawei Y6 2018 dia tsy manana sensor momba ny dian-tànana, na dia hitantsika aza izany hanana fanekena tarehy. Ka ho azo atao ny mamoha ny telefaona amin'ity fomba ity. Fiasa iray izay ahazoana fanatrehana betsaka amin'ny telefaona marika marika sinoa.
Ho fanampin'izany, hitantsika fa nisafidy famolavolana maoderina be ny telefaona. Hatramin'ny ahitantsika ny efijery iray manana tahan'ny 18: 9. Noho izany dia mahita zana-kazo manify isika. Zavatra efa nanjary fahita indrindra teo amin'ny tsena, na dia ao anatin'ny faritra fidirana aza. Amin'ny ankapobeny, hitantsika fa fivoarana miavaka amin'ny finday tamin'ny taon-dasa.
Famaritana Huawei Y7 2018
Amin'ny toerana faharoa no ahitantsika an'io maodely hafa io. Finday izay azontsika lazaina fa ambony noho ilay maodely teo aloha. Ho fanampin'ny zava-misy fa amin'ity tranga ity dia misy toetra sasany izay tsy misy amin'ny maodely hafa. Satria ity Huawei Y7 2018 ity dia manana mpamaky rantsantanana, ohatra. Ireto ny andinindininy feno amin'ny telefaona:
efijery: IPS LCD 5,99 santimetatra miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9 sy ny vahaolana 1.440 x 720 teboka
processeur: 430GHz Octa-core Snapdragon 1,4
Fitahirizana anatiny: 16 GB (azo itarina amin'ny microSD)
bateria: 3.000 mAh miaraka amin'ny famahanana haingana sy tsy misy tariby
ny hafa: Radio FM, fanekena tarehy ary mpamaky ny dian-tànana
lafiny: 158,3 x 76,7 x 7,8 mm
lanja: 155 grama
loko: Mainty, manga ary volamena
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa misy lafiny vitsivitsy iraisan'ny telefaona roa. Na dia milina amin'ny efijery lehibe kokoa sy mpikirakira hafa aza ity modely ity. Saingy ny specs hafa toa ny RAM, memory, batterie ary fakan-tsary dia tsy miova. Ka ny fitoviana dia maro amin'ireo fitaovana Huawei roa. Ny zavatra hitantsika dia manolo-tena an'ity telefaona ity mpamaky ny rantsantanana sy ny fanekena ny tarehy.
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa ny telefaona roa dia nisafidy efijery 18: 9, tena lamaody, miaraka amin'ireo endriny manify. Ho fanampin'ny fananana Android 8.0 Oreo ho rafitra fiasa. Ho an'ireo efa azon'izy ireo miaraka amin'ny andiany andiany farany indrindra.
Ity Huawei Y6 2018 sy Huawei Y7 2018 ity dia efa ofisialy ary efa nanolotra azy ireo ny marika sinoa. Na dia hatreto aza dia mbola mila mahafantatra ny vaovao momba ny vidin'izy ireo isika eny an-tsena ary koa rehefa hikapoka magazay erak'izao tontolo izao izy ireo. Tsy mbola naneho hevitra momba izany ny marika sinoa hatreto.
Amin'ny tranga Huawei Y6 2018 dia tombantombana izany ny vidiny dia mety ho ambony noho ny 159 euro tamin'ny maodely tamin'ny taon-dasa. Raha dinihina ny fanovana misy dia azo inoana fa izany no izy. Saingy tsy ananantsika izao angona izao.
Raha ny momba ny Huawei Y7 2018, tsy fantatray koa ny vidiny, ary vinavinaina fa mety ho eo amin'ny 199 Euros. Fa amin'ireo tranga roa ireo dia tsy maintsy miandry an'i Huawei ianao hilaza zavatra momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Y6 2018 sy Huawei Y7 2018: Ireo finday vaovao ao amin'ny faritra Y
Fiarovana Android: Ahoana ny fampiasana ireo fivarotana hafa amin'ny Play Store soa aman-tsara
Samsung SM-G8850 hita ao amin'ny TENAA. Izy io ve no Samsung Galaxy S9 Mini?